Ntughari bu onyinyo ndi oji | Martech Zone
Akụkọ ahụ jupụtara n'ụfọdụ akụkọ dị ịtụnanya banyere ụmụ mmadụ n'oge na-adịbeghị anya:
Alex Rodriguez kwetara na steroid (iju wepụrụ site na akwụkwọ akụkọ AROD nke MLB.com)
Michael Phelps ite ese anwụrụ. O mechara tufuo nnukwu nkwado nke Kellogg.
Ọbụna Barack Obama enweela izu ole na ole, na-agbali ichota ndi otu ulo oru ma na-agbanye site na ngwugwu ihe mkpali nke a na-ewu ewu.
E nwere ihe ndị metụtara ya. Onye ọ bụla n’ime ndị a nọ n’elu ụwa. Ha bụ ndị ọchịchị kachasị - ọ nweghị onye nwere ike ịbịaru ha aka.
Ikike bụ otu n’ime ihe ndị mmadụ nwere ike irite na-enweghị aha ọma. Ndị ikom atọ a bụcha ndị mmadụ nkịtị tupu ha enweta ikike. Ha mezuru ebumnuche ndi ozo kariri ihe dika ndi mmadu efu dika gi.
N'ime otu afọ, Onye isi ala Obama si na onye isi oche nke Senator toro ọkwa kachasị elu n'ụwa (ikekwe) n'ụwa. N’afọ iri, AROD toro bụrụ onye egwuregwu bọọlụ ana akachasị akwụ ụgwọ. N'ime afọ 10, Phelps ghọrọ onye Olympia kachasị mma na akụkọ ntolite, ihe a na-amaghị ama tupu asọmpi 7 ikpeazụ.
Ntughari di otutu dika onyinyo. Ọ dị mgbe niile ma ọ nọnyeere gị mgbe niile. Mgbe anwụ na-acha n’ihu gị, ọ nọ n’azụ gị wee chefuo gị. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ nkịtị, ọ nweghị onye na-a paysa ntị na ndo gị. Kaosiladị, mgbe ị guzo n’elu igwe mmadụ, ihe atụ na-agbada.
N'ụwa ebe a na-edekọ ihe niile anyị na-eme ma dịrị onye ọ bụla, anyị ga-eme ka ụmụ mmadụ bụrụ ụmụ mmadụ. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị zuru okè, anyị agaghị ezukwa okè.
Ka ị na-agba mbọ iwulite ikike, echefula na ị nwere aha ọma ebe ahụ ịkwado.
Amy Stark kwuru
Feb 13, 2009 n’elekere 10:08 nke abali
"Mgbe anyanwụ na-enwu n'ihu gị, ọ nọ n'azụ gị, ikekwe, echefuru echefu - mgbe ị guzo n'elu igwe mmadụ ahụ, ị ​​na-ese onyinyo."
Ee… ya na thatntanetị na onyinyo ahụ ga-enwe ihe ngosi nke ijeri mmadụ atọ na ọsọ ọsọ nke ìhè. O siri ike karịa imehie ihe ma kpuchie ya ugbu a. Ozi igbasa ozigbo.
Feb 13, 2009 na 5:28 PM
Ihe ejiri mara mmadụ dika osisi na aha dika ya. Onyinyo bụ ihe anyị chere banyere ya; osisi bụ ezigbo ihe. ” Abraham Lincoln
You're na-na ezigbo ụlọ ọrụ na echiche gị! 😉
Feb 13, 2009 na 6:13 PM
Anọ m na-eche n'echiche ịtụtụrụ akwụkwọ na Lincoln. Offọdụ n'ime ihe ndị mere na Channel Channel na-egosi na oge emeela m glued. Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta nke a! Erughị m eru inweta ụdị otito a, n'agbanyeghị.
Feb 14, 2009 na 11:29 PM
Ma Michael na ARod bụ nhọrọ nzuzu, Onye isi ala, yana ọtụtụ nhọrọ ọ ga - eme, ga - enweta ihe na - ezighi ezi.